Humna Qilleensaan Uummata Nagaa haleelaa mariin geeggeefamu nagaa fidu hin danda’u. | QEERROO
Gama tokkon marii jechaa gama kaannin immoo waraana labsa, uummataa nagaa Dirooniin haleelaa marii jedhamu kan shiraa ta’u ragaa ba’aa.
Tibba darbe Amajji 6,2022 Oromiyaa Dhihaa Godina Qellem Wallaggaa Gidaamii Ganda Burii jedhamutti mana barumsaa sadarkaa 1ffaa Burii humni Qilleensaa Bilxiginnaa haleele, Amajji 7,2022 Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Mana Sibu Ganda Caalaa Daabbus jedhamus humni Qilleensaa Bilxiginna haalele.
Humna Qilleensaan Uummata Nagaa haleelaa mariin geeggeefamu nagaa fidu hin danda’u. Rakkoo biyyaattin keessatti kufte jirtu keessaa kan baasu danda’u marii haqaa qabeessa kan hunda hirmaachiseedha jenne amana.
Kanaaf uummanni Oromoo da’oo Marii Biyyooleessaa jedhuun shira isaatti deema jiru dammaqinan ilaalun qabsoo isaa akka jabeessu hubachiisa.
Gamanuman Hogganoota KFO hidhaa irra hiikamuun maatii isaanitti dabalamaniin Baga Gammaddan jecha.
1.waahilaan qabsoo keenya hogganoonni KFO hidhaa irra ba’aan hidhaa sagalee isaanii fi yaada isaanii bilisaan ummatatti ibsachuu dhabuu biraatti akka hin seenne abdii qabna.
2. Hogganoonnii fi miseensotiin ABO manneen hidhaa Oromiyaa mara keessa jiran hatattamaan bahanii bilisaan akka ummata isaanii keessa sosso’an gaafana.
3,Haleellaa Humni Qilleensaa Bilxiginnaa Diroonii fi Jeetiin uummataa Oromoo irratti rawwaacha jiru hatattamaan akka dhaabbatu jenna.
4. Komaandii Postiin haal duree tokko malee Uummatarra akka ka’u gaafana
5.Loli addaan hin cinne Oromyaa irratti gaggeeffama jiru akka dhaabbatu .
6. Humni Alagaa Oromiyaa keessaa akka bahu
7. Ajjeechaan, manneen Qotee bulaa gubuu, hidhaa dhuma hin qabne ummatarraa akka dhaabbatu .
8.Hidhamtootni Siyaasaa Kuma Kurnootan Oromiyaa keessaatti hidhaa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman .
9. Hayyuu Dureen ABO duree qabsoo Oromoo waan ta’eef isa uggura jala kaayanii nagaa fi dimokraasii labsuun gonkumaa furmaata waan hin taaneef hatattamaan uggura jalaa akka bahu.
Dhuma irratti Uummanni Oromoo kan durii caalaa yeroo kanatti tokkummaa isaa eegun haala bara 2018 ture irra barachuun mooraa qabsoo Oromoo fi qabsaa’oota Oromoo tiksun bilchiinan qabsoo isaa akka jabeesu dhaamana!
Injifannoon Uummataa Oromoof!
Amajji 12/2022 !